PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: August 2009
NDF Statement on2CEC 2009
Posted by PNSjapan at 1:02 AM0comments
ဂျပန်ရောက် ဒီပဲရင်းတရားခံ ကြံ့ဖွတ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၀န်ကြီးဦးဌေးဦး တည်းခိုရာဟိုတယ်ရှေ့ခွပ်ဒေါင်းအလံနေရာယူ
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၂)ရက်
မြန်မာနိူင်ငံမှ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောနိူင်ငံရေးအခြေအနေများ နှင့်
ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးကို ဂျပန်အစိုးရမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိလ်များအား ဆွေးနွေးတင်ပြ
NCUB visted Japan to meet Japanese MPs for appealing about Depayin Masscure.
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိူင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ NCUB
အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ၊ လူ့ ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌဦးအောင်မိုးဇော် နှင့် ဦးဇော်မင်း
(FAC / NCUB ) ၊လူ့ ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် တို့ သည် ဂျပန်နိူင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
လာပြီး မြန်မာနိူင်ငံမှ ဖြစ်ပျက်နေသည့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စည်းရုံးရေးခရီး
ကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရသည့်အပေါ် ဂျပန်အစိုးရမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်အစိုးရသည် မြန်မာနိူင်ငံတွင် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး၊ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးအ
တွက် ( ODA )လူသားခြင်းစာနာသည့် အကူအညီများ များစွာကိုပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုဖြစ်ပေါ်နေသောအ
ခြေအနေမှာ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးသည် နှင့် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးသည်လည်း ဒီပဲယင်း
လူသတ်ပွဲသွေးအိုင်ထဲတွင် စုန်းစုန်းမြုပ် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း နှင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်
ထိမ်းသိမ်းခံရသည့် လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အမြန်ဆုံလွတ်မြောက်အောင်ဖိအား
ဂျပန်အမတ်များ သမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှုး Mr.Seishu Makino မှ ဂျပန်လွတ်တော် တွင်
ဆက်လက်တင်ပြတောင်းဆိုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာ့ရေးရာရုံးညွန်ကြားရေးမှုးချုပ် Rengo တာဝန်ခံ
Mr.Uchida မှ မြန်မာအစိုးရများကို အကူအညီပေးနေမှုများကို ရပ်ဆိုင်းပေးပြီး ဖိအားပေးမှုများကိုပိုမို
လုပ်ဆောင်သွားဖို တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားကြပါသည် ။ မြန်မာ့ရေးရာရုံ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်တာမင်းညို၊ FTUB
ဂျပန် တာဝန်ခံ ဦးညွန့် ဆွေ၊ NDF ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ် မိုင်ကျော်ဦးတို့ မှ ထိုဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကို
ဂျပန်လွတ်တော်သို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များရောက်ရှိလာပြီး အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာ အခြေခံရမည် မူ(၈)ချက် ရှင်းလင်းတင်ခဲ့သည့်အခမ်းအနားမှတ်တမ်း
Ethnic leaders vist Japanese MP for explaing Basic Principles
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဧပြီလ (၆)ရက်
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ ၌ အခြေခံမှု BasicPrinciples (၈)ချက်ရျင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း
ဂျပန်နိူင်ငံတိုကျိုမြို့ ၌ နယ်စပ်ဒေသမှ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ရောက်ရှိလာပြီး ဂျပန်နိူင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားစု တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ တန်းတူရေးကို အကောင် အထည်ဖေါ်သွားနိူင်မည့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိူင်ငံ၏ အခြေခံမှု (၈)ချက် Basic Principles နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပွဲ အခမ်းအနားတရပ်ကို ဂျပန်အစိုးရလွတ်တော် ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်နိူင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခမ်းအနားမှာ မြန်မာ့အရေးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ဂျပန်လွတ်တော် အမတ်များသမဂ္ဂအဖွဲ့ နှင့်ဂျပန်အစိုးရမှ တာဝန်ရှိသူများပါ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဤရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အနာဂတ် မြန်မာနိူင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာ ဂျပန်အစိုးရမှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် မြန်မာ့အရေးကို အကူအညီ ပေးနေသော ဂျပန်လွတ်တော်အမတ်များ သမဂ္ဂအဖွဲ့ တို့ မှ ပိုမိုပြီး နားလည်သဘောပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုအခြေခံမှု အခြေခံမှု BasicPrinciples (၈)ချက် ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ( ၉ -၁၂) ရက်နေ့ တွင် နယ်စပ်ဒေသနှင့် ပြည်ပရောက် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းများ ဒီမိုကရေစီအင်အားစု အဖွဲ့ အစည်းများ အားလုံး ပါဝင်သော နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးက ဖွဲ့ စည်းပုံရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံရမည့် သဘောတူညီချက်များဖြစ်ပါသည်။
တက်ရောက်လာကြသည့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုခေါင်းဆောင်များ
၁. ဦးခိုင်စိုးနိူင်အောင် (NCUB) ဥက္ကဌ-(၁)၊ NDF ဒုတိယ ဥက္ကဌ
၂. ဦးခွန်မာကိုဘန် (NCUB) ဥက္ကဌ-(၂)၊UNLD-LA ဥက္ကဌ၊ MPU
၃. ဒေါ်စန်းစန်း ( MPU)
၄. ဦးသိန်းဦး (NCUB) အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးx(၂)၊ MPU
၅. ဦးလှဦး ( FTUB ) ဥက္ကဌ ၊ MPU
၆. ဦးမောင်မောင် (NCUB) ( FTUB ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး
ရ. ဦးမြင့်သိန်း ( NCUB) ( NLD-LA) အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး
၁. ဦးသန့် ဇင်ဦး ( NLD-LA-JB) ဥက္ကဌ
၂.မျိုးမင်းထွဋ် ( LDB ) ဥက္ကဌ
၃. မိုင်ကျော်ဦး ( NDF ) ဂျပန် ကိုယ်စားလှယ်
၄. ဒေါ်ခင်ဆွေအေး ( FTUB ) ဂျပန် ကိုယ်စားလှယ်
၅. ဒေါက်တာ မင်းညို ( NCUB) ဂျပန် ကိုယ်စားလှယ်၊ မြန်မာ့ရေးရာရုံး ညွန်ကြားရေးမှုး
JTUC (Rengo) နှင့် PFB အဖွဲ့ မှ တာဝန်ရှိသူများပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပါသည်။